Saliidaha timaha dheereeya hair oil
Category: Health Caafimaadka
Timaha marka ay waayaan vitaminada qaar waxay bilaabaan inay hoobtaan oo ay daataan, inta badan marka ay timaha daadanayaan qofka wuxuu dareemayaa niyad jab siiba dumarka, qaar waxaa jira jajaba oo qofka marka uu qubays musqusha u galo wuxuu arkayaa timo daadsan suuliga, ama markuu shanlaysanayo, marka raga qaar iyagana marka ay timaha ka daadanayaan isla markii waxaa u soo baxdo bidaar taasoo u keenaysa inay iyagana niyad jabaan, isdoo kale marka timaha ay waayaan vitamiinada qaar cadaan bay isu rogaan taas oo lagu magacaabo cirada degdeg ah, qof yar ayaad arkaysaa madaxiisa oo dhan cad isu rogaya isagoo ku jira 30 sano.
sidee baan timaha u ilaalin karnaa?
su'aal muhim weeye timaha marka hore waxaad ku ilaalin kartaa inaad nadiifiso oo aad ku dadaasho saliiddda qumbaha ama saliidda khirwaca loo yaqaano waa inaad adeegsataa oo aad marsataa si aad u dareento inay roonaadeen, sidoo kale saliidahaas timaha way jilciyaan .
Malaga yaabaa daadashada inay ku xirantahay jirrida madaxa?
mararka qaarkooda qofka waxaa uu dareemayaa cuncun madaxa siiba maqaarka kore, kaasoo ka soo baxayo nabro ama fiman yaryar oo xanuun badan sidoo kale toxob ayaa fuusha madaxa oo keeni karta inay tinta hoobato.
hasee ahaatee waxaa lagaa rabaa inaad ilaaliso madaxaaga iyo jirkaaga iyo quruxdaada, wixii tintaada soo saari karo inaad adeegsato sidoo kale cuntada nafaqada leh timaha ayay u roontahay oo waxay siisaa awood iyo iftiin.